Elwa namagciwane - Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd.
Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe kanye nokwenza ngcono amazinga wokuphila kwabantu, isidingo sabantu sezinto zokulwa namagciwane nemikhiqizo kuzoqhubeka nokwanda. Ukuze uthuthukise impilo yabantu, uthuthukise indawo yokuhlala neyokusebenza, ucwaningo kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha, ezisebenza kahle kakhulu, ezingenabuthi, ezingenaphunga neze-antibacterial ezinezimpawu ezihlala isikhathi eside zokulwa namagciwane seziphenduke i-hotspot yocwaningo yamanje. Izinto zesiliva zokulwa namagciwane zinezici zokusebenza kahle okuphezulu, i-spectrum ebanzi, ubuthi obuphansi, ukunganambitheki, imvelo engangcolisi, ukuphepha nokuvikelwa kwemvelo, njll., Futhi baba ngomunye wabokuqala bokukhetha ama-antibacterial agents.
Njenge-nanomaterial, i-nanosilver inomphumela wevolumu, umphumela womphumela, usayizi we-quantum nomphumela we-macroscopic quantum tunnel effect, futhi inamandla amakhulu okuthuthuka nenani lesicelo emikhakheni ye-superconductivity, photoelectricity, antibacterial, kanye ne-catalysis.
Izinhlobo ezimbili zamagciwane, i-Escherichia coli ne-Staphylococcus aureus, bakhethwa njengabamele ukutholakala kwekhwalithi nobungako bezimpawu zokulwa namagciwane we-nano-silver colloid elungisiwe. Imiphumela yokuhlola iqinisekisile ukuthi i-nano silver colloid ekhiqizwe yi-Hongwu Nano inezinto ezinhle zokulwa namagciwane ezilwa namagciwane angenayo i-Gram-negative, ama-bacteria ane-Gram-positive kanye nesikhunta. Futhi izakhiwo ezilwa namagciwane zihlala ziqinile.
Ukusetshenziswa okuyinhloko kwe-nano silver colloid akugcini kulokhu okulandelayo:
Imithi: i-antibacterial kanye ne-anti-ukutheleleka, ukulungisa nokuvuselela izicubu;
Electronics: enamathela conductive, uyinki conductive, chip ukupakisha, electrode unama;
Izidingo zansuku zonke: i-anti-static, anti-bacterial coating / ifilimu;
Izinto ezisetshenziswayo: i-fuel cell catalyst, i-phase phase catalyst;
Izinto zokushintshanisa ukushisa; izinto zokugqoka ze-electroplating.
Indawo yokuhlala enempilo isibe ngumgomo wabantu. Ngakho-ke, amagciwane ezemvelo alimaza impilo yabantu nawo aheha ukunaka kwabantu
zihlale zingumsebenzi obalulekile kubantu ukuvikela impilo yethu. Ngokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, izinto ze-nano antibacterial zisetshenziswa kabanzi ekuhlanzeni umoya, ekwelapheni indle,
imikhiqizo yepulasitiki, ukumbozwa kwezakhiwo, ezempilo kanye neminye imikhakha.
Ukwahlukaniswa kwezinye zezinto ezisetshenziswa kakhulu ze-nano antibacterial
1. Izinto ze-Metal nano antibacterial
Ama-nanoparticles esiliva (ngohlobo lwe-powder)
b.Silver nanoparticles dispersion (in liquid form)
c. Ukusabalalisa okungenambala okungenambala kwe-nano yesiliva (kufomu eliketshezi)
2.Metal oxide nano izinto elwa namagciwane
b. Ama-nanoparticles we-CuO Copper oxide
c. Ama-nanoparticles we-Cu2O Cupous oxide
d. Ama-nanoparticles we-TiO2 Titanium dioxide (photocatalysis)
Ukusetshenziswa kwezinto ze-nano antibacterial
1. I-Nano enamathela elwa namagciwane
Ukumboza okulwa ne-antibacterial kanye ne-mildewproof, ukumbozwa komoya nokuzivikela okuzihlanza kwasungulwa ngokungeza okokusebenza okushiwo ngenhla kwe-nano antibacterial ku-coating, nomphumela omuhle wokuhlanzwa watholakala.
2. Amaplastiki we-Nano antibacterial
Ukwengezwa kwesibalo esincane semithi elwa namagciwane kunganika ipulasitiki isikhathi eside i-antibacterial kanye ne-bactericidal ability.Plastic antibacterial material engezwe inani elingu-1% lingaba seplastikhi yesikhathi eside elwa namagciwane kanye nenzalo.
Izicelo zeplastikhi elwa namagciwane zifaka izinto zokudla, ukuxhumana ngogesi, izinto zasendlini, izinto zokwakha, izimpahla zehhovisi, amathoyizi, ukunakekelwa kwezempilo nemikhiqizo yasendlini.
3. Imicu ye-Nano antibacterial
Ngoba ifayibha ingamunca amagciwane amaningi, uma izinga lokushisa lifanele, ama-microorganism azophindaphindeka ngokushesha, ngaleyo ndlela abangele ukulimala okuhlukahlukene emzimbeni womuntu.
I-Textile fiberantibacterial iyisixhumanisi esibalulekile sokuqinisekisa impilo yabantu.
4. I-Nano antibacterial ceramics
Ingaphezulu elwa namagciwane le-tableware ye-ceramic litholakala ngokungeza izinto ze-nano antibacterial.
5. Izinto zokwakha ze-Nano antibacterial
Izakhiwo zesimanje zinokuqina komoya okuhle, ukushisa okwanele nokungenisa umoya, futhi izindonga zingaba ngamazolo futhi zibe nomswakama, okunikeza izimo ezikahle zokukhiqiza nokwanda
Ukusetshenziswa kwezinto zokwakha ezilwa namagciwane, ukumbozwa kwama-antibacterial kanye nopende wokulwa namagciwane kunganciphisa kakhulu izinga lokusinda kwama-bacteria ezindaweni zefenisha,
izindonga zasendlini nomoya wasendlini, okuyindlela ephumelelayo yokunciphisa amathuba okutheleleka ngamagciwane nokutheleleka kokuxhumana.